Kiim Joong-un 'hidhata jabaa Kooriyaa Kibbaa fi Kaabaa gidduutti fedhu' - BBC News Afaan Oromoo
Kiim Joong-un 'hidhata jabaa Kooriyaa Kibbaa fi Kaabaa gidduutti fedhu'
Goodayyaa suuraa Kiim-un jiila Kooriyaa kibbaa gara irbaataatti wayita simatu
Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-un walitti dhuufeenya Kooriyaa Kibbaa waliin qabu ''cimsanii akka itti fufan'' dubbataniiru jechuun maddi oduu mootummaa gabaaseera.
Daawwannaan waggoota dheeraa booda qoondaaloota olaanoo Kooriyaa Kibbaan Pyoongyaangitti godhame kana irratti hogganticha yeroo baay'ee namootatti hinsiqnee Kiim waliiinis irbaata akka qoodatanis gabaasni kun dabaluun ibseera.
Obbo Kiim gara aangootti erga dhufanii as qondaalonni Sii'ool wayita isaaniin wal argan kun yeroo jalqabaafi.
Walgahii godhamee ilaalchistee gammi lamaanuu ''waligaltee quubsaa'' irra gahaaniiru jechuunnis Kooriyaan kibbaa ibsa gabaaba laateetti.
Jiilli kun haasaa Kooriyaa Kabaa waliin qabaate ilaalchisee Ameerikaaf ibsa gabaabaa gochuuf torbe kana keessa gara Washingiitoonitti imala jedhamee eegama.
Fooyya'aa jiraachuu walitti dhufeenyi biyyoota Kooriyaa lameen gidduu jiruu ilaalchistee Ameerikaan ''ofegganoon kan abdatu'' ta'u wayita dubbatu, hanga Pyoongyaang meeshaa niiukilara ishee dhiiftutti haasaa seera qabeessa waliin akka hingoones murteesiteetti.
Yeroo Olompikiin geggeefamaa turee keessa faarri walitti dhufeenya Kooriyaan Kaabaa agarsiisaa turte jijjirama kan hinfinneefi sadarkaa kanatti kan cehuu hindandeenyedha jette Ameerikaan yaada turte.
Kim Joong-un erga bara 2011 keessa aangoo qabate jalqabe qoondaaloota biyya ambaa baay'ee muraasaa waliin wal arge. Qondaalonni Kooriyaa Kibbaas Pyoonyaangiin dhumarratti kan daawwatan bara 2007 keessa ture.
Kanaafu jiilli Kooriyaa Kibbaa kun nama kanaan harka walfuudhuun kolfaa fi gamachuun irbaata irra waliin taa'uun isanii waan guddaadha.
Jiila kana keessattis dursaan dhimma nageenya Suuh Hoon fi Gorsaan dhimma Nageenya Biyyoolleessa kan ta'an Eui-yoong ni argamu.
Isaanis Kooriyaan lamaan alaabaa tokko jalatti hiriiranii yeroo Taphoota Olompikii erga dabarsanii booda haala muddamaa salphachaa dhufe sana guddisuu iratti kan xiyyeefataa turan.
Haasaa seera qabeessa gochuun lola diploomaasii Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa giddu jiru kan dhabamsiisuu fi itti fufuunis Kooriyaa Kaabaarratti hagam qobqobiin yoo godhameyyu kan itti cichitee didaa turte meeshaa niiukileera ishee akka hambistu taasisa jedhame abdatama.
Akka dhabbanni madda oduu Kooriyaa Kaabaa KCNA'tti, Obbo Kiim jiila kana ''haala ho'aan akka simatanii'' fi ''yaada qulqulluun hasoofsiisaa turuu'' isaaniis dubbateera.
Goodayyaa suuraa Jiilli Kooriyaa kibbaa Kiim waliin irbaataaf otuu hintaa'in dura gitoota isaanii waliin maree godhanii turan.
Jiilli kunnis xalayaa Preezidaantii Kooriyaa Kibbaa Moon Jaay prezidaantii Kooriyaa Kaabaaf barreessan dabarsanii kennaniiru. Xalayaa Obbo Kiimtti barreefame kunis haasaa dabalataaf kan isaan afeeru ture.
Akka madda oduu KCNA 'tti, Xalayaa kana ilaalchisee Obbo Kiim '' yaada irratti kenuun waligaltee quubsaarra gahaniiru'' akkasumas akka bakkaan gahamuufis qajeelfama kennaniiru jechuun gabaaseera.